Atletico Madrid Oo U Dacwooneysa FIFA Madaama Ay Barcelona Si Sharcidarro Ah – XOGMAAL.COM
Ilo lagu kalsoon yahay oo ay heshay hilinka Ingariiska ee Sky Sports ayaa sheegaya in Atletico Madrid ay cabasho u gudbineyso FIFA oo la xiriirta xiisaha Barcelona ee weeraryahankooda Antoine Griezmann.
Mid ka mid ah agaasimayaasha kooxda Barcelona ayaa dhawaan waxa uu kulan qado ah la qaatay qoyska weeraryahanka Faransiiska Antoine Griezmann iyadoo kulankaas la sheegay in looga hadlay suurtogalnimada uu xiddiga Atletico ku imaan karo Camp Nou xagaaga soo socda.
Inkastoo uu Griezmann si rasmi ah u laheyn wakiil hadana waxaa kulan goob joog ka aheyd walaashiis oo inta badan arimaha wadaxaajoodyada u qaabilsan, halka sidoo kale ay kulanka qadada ah ka qeyb galeen waalidkiis.
Barcelona ayaa la sheegayaa inay diyaar u tahay inay bixiso lacagta 100ka milyan euro ee lagu burburin karo qandaraaska Antoine Griezmann, waxaana ay marka hore ka shaqeynayaan inay xiddiga Faransiiska ku qanciyaan inuu u soo wareego gobolka Catalan oo ka soo tago caasimada Spain.
Sida Sky Sports ay sheegtay Atletico Madrid ayaana ka carotay talaabada ay qaaday Barcelona, waxaana ay qorsheynayaan inay cabasho arintaan ka dhan ah u gudbiyaan xiriirka kubada cagta dunida ee FIFA.
Xiddiga Faransiiska ayaa qandaraas cusub u saxiixay Rojiblancos oo ku eg bisha Juun 2022, waxaana mid ka mid ah sababaha ay Atletico u dacweyneyso ay tahay inay ku eedeynayaan Barcelona inay ka qasaan xilli ciyaareedkooda horyaalka La Liga.
Inkastoo Barcelona ay hogaamineyso horyaalka La Liga islamarkaana Atletico ay ku jirto kaalinta labaad iyagoo lix dhibcood ka danbeeya, kooxda Madrid ka dhisan ayaa ku andacooneysa in xiriirka lala sameeyay xiddigooda inay tahay qiyaano cad oo ay Barcelona ku dooneyso inay xilli ciyaareedka kaga qasto Atletico si aysan ugu dhawaanin dhibco ahaan.
Antoine Griezmann ayaa xagaagii la soo dhaafay u dhawaa inuu ku biiro Manchester United isagoo xitaa qadka taleefanka kula sheekeystay tababare Jose Mourinho, laakiin heshiiskaas ayaa burburay markii Atletico Madrid xayiraad laga saaray suuqa kala iibsiga.
Tababare Diego Simeone ayaana dhawaan wareysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in loo ogolaan doono Griezmann inuu baxo xagaaga haddii uu dalbado taasoo sarre u sii qaaday rajada kooxda Barcelona.
Xulalka Belgium iyo England ku hardami doona kaalinta 3-aad!
Ciyaarihii Kubadda Cagta ee Soomaalida Mareykanka oo la soo Gaba-gabeeyay- Warbixin +…
Manchester United oo weeraryahan ka raadineysa Barcelona